Iwe haudi app yekushandisa Omegle pafoni yako kana piritsi!Iyo webhusaiti inoshanda zvakanaka pane mobile.
Sangana nevasingazive nezvako zvaunofarira!
Omegle(oh meg ull)inzira yakanaka yekusangana neshamwari nyowani, kunyangwe uchidzidzira kushamwaridzana.Paunoshandisa Omegle, unopetwa zvisina tsarukano nemumwe munhu kuti utaure mumwe-ne-mumwe.Kana uchida, iwe unogona kuwedzera zvaunofarira uye iwe unozove wakabatanidzwa nemunhu akasarudza zvimwe zvezvido zvakafanana.
Kukubatsira kuti ugare wakachengeteka, nhaurirano hadzizivikanwe kunze kwekunge waudza mumwe munhu kuti ndiwe ani (hazvikurudzirwe!), uye unogona kumisa chat chero nguva.Ona yedu Mitemo Yebasa uye Nhungamiro Yenharaunda kuti uwane rumwe ruzivo nezve zvekuita uye usaite mukushandisa Omegle.Omegle vhidhiyo yekutaura yakamisikidzwa asi hapana mwero wakakwana.Vashandisi ndivo vane mhosva yemaitiro avo pavanenge vachishandisa Omegle.
Iwe unofanirwa kuve 18+ kana 13+ nemvumo yevabereki uye nekutarisa kuti ushandise Omegle.Ona Omegle's Terms of Service kuti uwane rumwe ruzivo.Dziviriro yevabereki inodzora iyo inogona kubatsira vabereki kuwanikwa mune zvekutengesa uye unogona kuwana rumwe ruzivo pa https://www.connectsafely.org/controls/ pamwe nedzimwe nzvimbo.
Ndokumbira usiye Omegle uye ushanyire saiti yevakuru panzvimbo kana zvirizvo zvauri kutsvaga, uye uri 18 kana kupfuura.
Pamwe chete, tichazviita.Kukurukurirana Kwakachengeteka Kwese Kwaunenge Uri
Isu tinofara kukubatsira kuti urambe uchibatana, kutaurirana uye kutaura pfungwa dzako kuti iwe ugone kuwana zvakawanda pamwe chete.Tinodada nekuvimbwa nemamiriyoni emabhizinesi, mabhizinesi madiki uye vanhu vakaita sewe.
Vakai hukama hwakasimba hwebhizinesi, simbisa kubatana, uye itisa makonferensi arikuita neHD vhidhiyo uye odhiyo yevanosvika chiuru chevatori vechikamu.
Gadzirisa makamuri ekusangana kuti asangane nekuchinja kwevashandi zvinodiwa uye chiyero chehofisi uye kure kure mafambiro neHD vhidhiyo uye odhiyo, isina waya yekugovana zvemukati, uye inodyidzana meseji mabhodhi.
Simudzira izwi rako neyedu yepasirese Cloud telephony mhinduro ine yakachengeteka yekufona nzira, kufona mitsara, SMS, kufona-kumusangano, nezvimwe.
Tora mukana wekushanda kwehofisi kumba - musangano wevhidhiyo, kufona, mabhodhi emeseji uye makomendi pane chako chishandiso chekubatana.
Mhinduro yekutaura inosanganisirwa neakaundi uye inorerutsa mafambiro ebasa, inovandudza goho, uye inova nechokwadi chekubatana kwakachengeteka pakati pevashandi mukati nekunze kwesangano.
Wedzera uye kurerutsa ruzivo rwako rweZoom neinopfuura chiuru chezvishandiso uye masanganiswa ekuronga, kubatana, kudzidza, kunyora, CRM, nezvimwe.
Zoom inopa Vhidhiyo Webinars uye ichangoburwa Zoom Zviitiko zvigadzirwa kusangana neako ese chaiwo chiitiko chinodiwa.Gadzira chaiwo zviitiko zvinozodiwa nemunhu wese.Tanga nhasi neZoom Zviitiko uye Vhidhiyo Webinars.
Shandisa maAPI edu, SDKs, webhooks, uye nezvimwe kuvaka akapfuma maapplication, akasarudzika ekubatanidza, uye mashandiro matsva anoenderana nezviripo Zoom sevhisi workflows.
Sevha-inogashirwa pamhepo maitiro ayo anogona kuita mari nyore uye akayerwa kune vatsva vateereri.
Inonakidza Random Vhidhiyo Chat App
Tikugashirei kuChatSpin, yakasarudzika vhidhiyo yekutaura app inoita kuti zvive nyore kusangana nevanhu vatsva online.ChatSpin inopa vhidhiyo yekutaura maficha anosanganisira kumeso masks, murume kana mukadzi uye mafirita enyika, chat yakavanzika, nezvimwe.Taura nevanhu vasina kurongeka pasi rese ipapo ipapo.Gadzira shamwari nyowani, tsvaga zuva, ratidza matarenda ako, bvunza zano, taura zvematongerwo enyika, kana ingonakidzwa nekutaura kwevhidhiyo nemumwe munhu waungadai usina kumboonana naye.Zvemahara uye zviri nyore kutanga vhidhiyo kutaura uye kunakidzwa.Iwe hauzive wauchazosangana naye inotevera!
Kana iwe uri kutsvaga kubatana nevanhu vatsva, kungotaura kwevhidhiyo ndiyo nzira yekuenda, uye ChatSpin ndiyo mota inokuendesa ikoko.Isu takagadzirisa app yedu kuti iwe uwane zvauri kutsvaga-nzira yekubatana nevanhu vatsva.
Saka wakamirirei?Taura nevanhu vasina kujairika izvozvi!
Yemahara Cam Chat Features
Takatanga Chatspin nechinangwa-kuita kuti zvive nyore kutanga kukurukura nevasingazivi.
batirira.Handiyo nyaya izere.
Nyika yakabatana, nyika yaunokwanisa kuita hukama chaihwo nevamwe vanhu, vemuno nekunze, ndiyo yakasunda timu yedu kugadzira vhidhiyo app.Kufona kwega kwega kunoswededza pasirese, kunotibatsira kuwana nzeve dzekuteerera, uye kunotipa nzvimbo yekutsvaga mazano nemumwe nemumwe.
Chatspin inoita kuti zvive nyore kwauri kuti utaure nevanhu vasina kujairika vakakunakira.Iti zvakanaka kuti usasangana nevanhu vakakodzera.Chatspin's random video chat app ndiyo yako portal yekunzwa yakabatana zvine mutsindo kune vamwe, pedyo nekure.
Takatarisana, Tinder's opt-in vhidhiyo yekutaura chimiro, chave kubuda pasi rose
Tinder, parizvino yakakura kwazvo pasi rose kufambidzana app yekuti vanhu vawane machisi uye vabatane nawo, iri kuwedzera chimwe chinhu nhasi kuwedzera nguva inoshandiswa nevanhu muapp, uye kutaurirana kwavanogona kuita mukati mayo.
Face to Face, chinhu chekusarudza-mu-chete chakatangwa naTinder kutanga kwegore rino chinoita kuti vashandisi vataure nemumwe nemumwe pasina kupanana ruzivo rwemunhu uye chete kana vatarisana necam, iko zvino kuri kuwedzera pasi rose, pamwe kufamba kwakakodzera panguva. nguva apo vanhu vazhinji vasiri kusangana mumunhu.
Tinder anonyatsoziva zvinhu zvinokatyamadza zvemasevhisi ekupfimbana, uye nekudaro zvakaratidza kuti haisi timu yevhidhiyo yekambani asi timu yayo yeTrust and Safety yakavaka iyi.
"Tinofara kugovera kuti chimiro chedu cheFace to Face chiri kuenderera kunharaunda yedu yepasi rose mushure mekugamuchira mhinduro yakanaka kubva kunhengo dzedu dzakakurumidza kuiwana," akadaro Rory Kozoll, Musoro weTrust uye Safety Product kuTinder."Izvi zvinowedzera kune yedu inokura runyorwa rwezvimiro zvakanangana nekuchengetedzwa kwenhengo mukati merwendo rwavo rwekufambidzana, sePikicha Verification, Safety Center uye tekinoroji yedu inogumbura yekuona meseji.”
Kupfimbana maapplication angaite senge chikamu chisinganzwisisike kubudirira munguva iyo vazhinji vari kutarisa - kungave nekuda kwemitemo yehurumende, kana kurudziro kubva kunyanzvi dzehutano, kana zvese zviri zviviri - pakufambidzana nekuungana mumabhuru madiki, anozivikanwa, akajairika.
Asi kutaura zvazviri panoratidzika kunge paine mukana pano: vanove nzira yekuti vanhu vabatane uye vaonane, panguva iyo mabhawa mazhinji nedzimwe nzvimbo dzemisangano dzechinyakare dzakavharwa, kana kuwana mashandiro avo emazuva ese ari mashoma. , uye vanhu vanongoonana zvishoma mumunhu nekuda kwezvikonzero zvese zvaungafungidzira.
Sezvineiwo, Tinder, maererano nenhamba kubva kuAppAnnie, yakaramba ichimira munzvimbo yepamusoro yekurodha yemapurogiramu emararamiro gore rino (ikozvino iri panhamba yechitatu paIOS muUS).
Uye iyo vhidhiyo yekutaura ficha inongosimudzira pfungwa yekushandisa iyo app kwete kungoona kuti ndiani ari kunze uko uye ndiani waungafananidza naye, asi kutaurirana nevanhu ivavo.
Chimwe chekuwedzera apa ndechekuti haisi yakakwana yemahara-yese-yese spamfest yevanhu vasingadiwe vanosvika kwauri, sezvavangaita mubhawa.
Tinder inoziva kuti mapato ese ari maviri anofanirwa kusarudzwa kupinda muchimiro, uye iwe unofanirwa kunge watofananidza nechekare muchikamu cheapp iyo chat isati yatangwa.
Uye kunyangwe ipapo iwe unogona kusarudza kufuratira hurukuro dzevhidhiyo kana dzapinda, sezvaungangoita kufona nguva dzose.
Uye, kana iwe uri kuwana vanhu vanotyisa vachitaura zvinhu zvisina kufanira kwauri uye vachikufonera zvakanyanya, uye iwe usingade kushandura chimiro zvachose, unogona kutaurira vanhu nekukwenya kune yavo mbiri uye nekutevera "report" mirairo.
Tinder yanga ichitamba nemavhidhiyo maficha kwemakore kuwedzera nzira dzinoitwa nevanhu paapp, vhidhiyo ichive imwe yeanonyanya kufarirwa uye anoita masvikiro mumaapps parizvino.
Zvave zvakasanganiswa bhegi remigumisiro.Tinder Loops, imwe nzira yekuzviratidza, yanga iripo kubva 2022 uye ichiri kusimba.Dzimwe nhamburiko dzakaita seSwipe Night apocalyptic inopindirana vhidhiyo mu-app show yakachengetwa munaKurume nekuda kweCovid-19, kunyangwe nguva pfupi yadarika ichiita senge showa iri kumutsiridzwa mune mamwe misika.
Callpy ichakubvumidza iwe kuona mukanawekutaurirana nevashanyi kune yako saiti.
Izvi zvichava nechokwadi chekukura kwekutengesa, kuvandudzazvakanyanya kushandurwa kwesaiti, uye kuwedzerakushanya kunodzokororwa kubva kune vashanyi.
19 mazuva ekufona emahara
Wana 19 mazuva demo
Wana mazita evashanyi kubva kuneakavhurika masosi!
Batanidza kune social mediapejinetworks
Mapeji ewebhusaiti akashanyirwa
Iyo data inosiiwa nemushandisi inogona kuiswa kuCRMuye zvakare kuiswa sefaira
Kuunganidzwa kwe data yevashanyi kunoitwa zvisinei nekuvapo kweanopa mazano.Mazita anozopinda muCRM (AMO kana Megaplan) panhunzi pasina iwe kutora chikamu.
kusanganisa neyakakurumbira crm
Wedzera vatengi vatsva uye mabasa kuCRM mukuita kwenhaurirano
zvese zviri nyore
hurukuro yemahara nevashanyi pasina kuganhurirwa kwebasa
Chat yemahara zvachose
Hapana muganho webasa, hapana muganho wenguva
Isu tiri nani pane vatikwikwidza
Yemahara inoshanda chat
27 mabasa emahara
27 sevhisi yemhando yekudzora maturusi
Tinopa zvipo zvekutaura shamwari
Kubva 215 ₽ per consultant kubasa pamwedzi
3 dzimwe nzira dzekukurukurirana
Chat, odhiyo, vhidhiyo, chiitiko chekutarisa
Kudzora kuwedzeredza, odhiyo / vhidhiyo kutaurirana
19 mazuva ekukura kwekutengesa, makumi maviri mabasa
KUFNUKA UYE KURERUDZWA KWEMABASA NEZVINHU
Nzirayechinyakare yekupa mazano online
Zvemahara pamhepo mafonikubva kune vashanyi
Ita kubvunzurudzwa kwevhidhiyopasaiti
Shandura mushanyi kuburikidzanemapeji, ratidza zvirimukati
Tarisa zviitiko zvevashanyimunguvachaiyo
Simbisa uye tsanangurazvinhu pane pejirevashanyi
Callpy inozongoparubatsiro kune anobhowekanamushanyi
Yakadzama gadzirisoyewidget maitiro anemakambani ekuzivikanwa zvinhu
Chengetedza otomatiki mamengievatengi muCRM
Kuunganidzwa kwevanobatikanevashanyivesaiti kuburikidza neCallpy fomu
Gadzira mapoka evanopa mazanoGoveramafambiro evaenzi kwavari
Joinha iyo inonyanya kufarirwa yeRussia chat yevhidhiyo yekufambidzana, kushamwaridzana kana kungova nenguva yakanaka yekubatana neshamwari nyowani neshamwari dzekare munetiweki. Zuva nezuva World Wide Web iri kuwedzera mukurumbira uye inopa nzira itsva uye dzinonakidza dzekutaura paInternet kubva kumativi ose enyika, nerubatsiro rwekukurukurirana kwevhidhiyo uye mamwe mabasa ewebhu zviri nyore uye zviri nyore kujairana nevanhu vanofarira, kwete kungotaura chete. Yekutanga vhidhiyo chat yekutaurirana uye kufambidzana Webhu kamera chatroulette-worldwide.com kutaurirana pasi rese online. Sezvo nhamba dzakawanda vechidiki (vakadzi nevarume) vari kuwana hafu yavo kuburikidza nevhidhiyo kufambidzana muvhidhiyo chat pasina kubuda mukamuri! Kubudirira kwepfuma.
Chakavanzika chekubudirira chat-ruletka.net chiri nyore, nekuda kwewebhu cam mativi kunze kwekutaurirana vanokwanisa kuongororana nekuona nekuti izvi zvakakosha kuongorora hafu yechipiri. Chat yakawana mukurumbira wakawanda nekuda kwekugona kuwana shamwari mune yakasarudzika kurongeka maitiro ekutamba spin bhodhoro, kubva kupi, uye akawana ese anozivikanwa zita rekutaura roulette. Mazano uye matipi Iva wakatendeseka mauri nekuti paunosangana muhupenyu chaihwo neshamwari nyowani vhidhiyo taura munhu wese anobvunzurudzwa anoda kuona vanhu chaivo panzvimbo yezvinyorwa zvekunyepedzera muvhidhiyo chat. Kurukurai, tsvagai shamwari, shamwari dzekare, edza kubata nhaurirano nemunhu mumhepo inofadza, dzivisa kunyomba, chengetedza hurukuro inofadza uye inofadza - ndiyo kiyi yekubudirira kufambidzana! Ita rumbidzo, ipa zvipo! sezvazviri muhupenyu chaihwo,zvipo zvinopiwa kunzwisisa anodana kuti vakazvitsaurira hanya uye kumira pamberi penyu pakati shamwari neshamwari. Regulations russian vhidhiyo chat coomeet memeet inopa sevhisi chat nenzira yakanaka. Hurukuro dzechat dzinonyanya vashandisi vanotaura chiRussian.
Zvakanyanya kurambidzwa kwete tsika, kwete censor kutaura mune chero chimiro.Kukurukurirana ikoko pamusoro penyaya yepabonde nevana kusvika kumakore gumi nemasere.Zvinorambidzwa kuratidza nhengo dzakavandika dzakamanikidzika.kuchengetedzwa Kwekuchengetedza vhidhiyo chat kuderedza nhamba yevanhu vasina kutendeseka Chisarudzo pamusoro pekunyoresa nyore izvo zvisingazove zvakaoma asi zvichabatsira sefa yekukurukurirana uye kuvhara vanopinda.
Nzvimbo Dzakanakisa dzeKukurukurirana senge omegle muna 2022 - Nzira dzekutaura dzeMahara Vhidhiyo Chat
Isu tinoshandisa Indaneti kumabasa akawanda akasiyana, asi chimwe chezvikonzero chikuru ndechekushamwaridzana.Kudiwa kwekudyidzana imamiriro emunhu anounza nyaradzo uye kugutsikana kune vanhuwo zvavo vazhinji.Ndosaka Facebook yakakurumbira.
Asi kune dzimwe nzvimbo dzakawanda uko vanhu vanogona kusangana. Zvizhinji zvacho zvinonzi maforum kana mameseji mabhodhi evanoisa macomments vozodzoka pava paya kuti vaone kuti pane apindura here. Nekudaro, kune akawanda mawebhusaiti anofambisa-chaiyo-nguva kugovana ari padyo nehurukuro dzemunhu sezvaunokwanisa kubatana neinternet.
Imwe yemasaiti anozivikanwa inonzi Omegle, uko nhengo dzinodyidzana kuburikidza nevhidhiyo, odhiyo, kana kungonyora. Inzvimbo yakanaka yekusangana nevanhu vasina kujairika uye kungotanga hurukuro nemunhu wausingazive. Asi semasaiti makuru mazhinji, Omegle yave nevanhu vakawanda.
Pazasi iwe unowana mamwe machat makamuri seOmegle kwaunogona kubatana neshamwari nyowani.
1. Chatliv:Chatliv - Iyo inokurumidza uye iri nyore nzira yekuita webcam kutaura nemunhu wausingazivi kubva kupi zvako pasi rose.Zvese zvaunoda kuti uite kuisa hunhu hwemunhu, iyo sevhisi inozosarudza pakarepo mutorwa akakodzera uyo anodawo kusangana nemunhu akaita sewe.
Chatliv ndiyo yakanakisa vhidhiyo yekutaura saiti uye zvakare imwe yeanonyanya kufarirwa vhidhiyo yekutaura saiti.Zviuru zvekutaura zvinogara zviri online kubva pasirese pasirese mu online chat rooms.
2. CooMeet:Coomeet iRussia-mutauro wevhidhiyo chat uye dating site (roulette).imwe yeakanakisa sarudzo dzechatroulette uye omegle, mu coomeet unogona kutanga vhidhiyo kufambidzana nevasingazive kubva pasirese.Coomeet ari kushanda pamusimboti we roulette, zvinoreva kuti hauzive wauchataura naye.kana iwe uri kufinhwa saka marudzi aya ekutaura anogona kukuunza iwe kunakidzwa.
Zvinoumba Coomeet:1. Gara uchibatana nemunhu wausingazivi2. Kukurukurirana kwepachena kwevhidhiyo3. Wedzera vanhu vasinganzwisisike kushamwari dzako mazita4. Ramba uchikurukura nemutorwa waunoda5. Tumira zvipo uye rosi kune waunoda6. Tsvaga shamwari dzakanakisisa
3. TinyChat:Nhasi, TinyChat ibasa guru rekutaura nemavhidhiyo paInternet.Iyo kambani inodada kuti vashandisi vanogadzira 5 miriyoni maminetsi emhepo pazuva.Ikoko iwe unowana zviuru zvechats, kunyangwe dzimwe dzakatangwa nevanhu munharaunda yako, uye kana ukasawana iyo theme yaunoda, unogona kugadzira yako.
TinyChat inobvumira anosvika gumi nemaviri mavhidhiyo enzizi pakamuri uye inoshandisa API uko vashandisi vanogona kutenderera mavhidhiyo epamhepo kubva kune anotambirwa pasevhisi uye hazvina kukosha.Vanhu vanouya pamwe chete kuti vataurirane kuburikidza nemakrofoni, vhidhiyo kana meseji yekukurumidza.
4. Omegle Webcam:Omegle Webcam ndiyo inonyanya kufarirwa kufambidzana uye chatting webcam. Kupfuura 20.000.000 vashandisi vakanyoresa. Yemahara Chat Roulette Chats. nzvimbo dzakadai omegle.Omegle Webcam inzira yemahara yeOmegle isina kurongeka vhidhiyo chat, usingazivikanwe taura nevausingazive uchishandisa webcam uye kusangana nevanhu vatsva ipapo. Vhidhiyo yekutaura nevashandisi vasina kujairika, ita shamwari nyowani. Iva nekudyidzana kwekudyidzana nevadikani veomegle.Omegle.webcam imhando yechatroulette saiti.
5. Bazoocam:Bazoocam imwe nzvimbo yepadandemutande yekutaura yakasununguka yakanyatso kudzika kuti igare yakachena.Kufanana nemamwe masaiti ataurwa, wakangoerekana wamhara pane emumwe munhu.Kana iwe usingade zvaunoona, wobva wadzvanya bhatani rekuti "skip" woenda kune mumwe munhu.
Bazoocam inopa akati wandei mitambo yevazhinji yaunogona kujoinha semazaya echando kana kana ukafinhwa kutaura nezvako.Kana wakafinhwa, vanokupa kuita chimwe chinhu chisiri chenguva dzose, asi kukuyambira nezvekuchengeta hembe dzako.Edza kupfeka sutu kana kuridza mimhanzi yaunofarira.Heck, ridza gitare kana kazoo uye uchawana vanhu vazhinji vekutaura navo.
6. FaceFlow:FaceFlow - Vakomana ava vari kutora social media kune imwe nhanho inotevera nekubvumira vashandisi kuve nevhidhiyo chats inokwanisa kugarisa vanhu vatatu panguva.FaceFlow inopa "yemahara vhidhiyo chat uye vhidhiyo musangano neshamwari, mubrowser yako chaiyo," asi unogona zvakare kutaura nevausingazive.Vashandisi vanogona ikozvino kugadzira chimiro chekutsvaga uye vanogona kugovera vavanofarira mafoto nemavhidhiyo paYouTube.
Kunze kwekungova imwe sevhisi yewebhu yekutaura, saiti ino inowirirana nemasevhisi makuru ayo Skype inofanirwa kupa.Inopa zvinyorwa uye imwe-nguva vhidhiyo chats.Uye kuita kuti zvinhu zvinakidze, FaceFlow yakaburitsa mutambo wevazhinji unonzi Flappy unotaridzika wakaoma.
7. ChatRandom:Chatrandom ine zvimwe zvibodzwa zvikuru, chimwe chazvo ndechekuva zita rimwechete seFacebook, Twitter kana YouTube.Iyi imwe webcam saiti inobatanidza mushandisi nemumwe mushandisi asina kujairika.Yakaratidzika seimwe nzira yeChatroulette nekuti saiti yakachinja mitemo kazhinji.
Kuti vazadzikise chinangwa ichi, vanounganidza vanhu vanobva kumativi ose enyika uye vanogara vachiwedzera nyika itsva nemitauro.Unogona kusarudza kusangana nemunhu mumwechete, neboka, kana nevasikana.Iwe unogona zvakare kusarudza sarudzo yekutaura kuburikidza nevhidhiyo, nevashandisi vengochani, kana nemutauro wakasiyana.Ivo zvakare vanowedzera imwe yekuwedzera webcam uye mamwe masevhisi kusangana nezvinodiwa nemushandisi.
8. Chatroulette:Chatroulette ndeye webcam-based chat service ine nzira yakasiyana yekubatanidza vashandisi nevasingazivi.Zvinofanira kuita sekutamba roulette yeRussia, chete pachinzvimbo chekutamba nepfuti, iwe unotaurirana nemuromo kuburikidza nemameseji akataipa uye/kana webcam, uye kana ukataura kana kuita chimwe chinhu chisingafarirwe nemumwe wako, vanosiya chat ( "kuuraya") hurukuro).
Yakagadzirwa muna 2022 nemwana ane makore gumi nemanomwe akaunza saiti kubva kuimba yake yekurara kuenda kuimba yemubereki wake.Kunyangwe pasina kushambadzira, saiti ino yakakura kusvika pakukura zvakanyanya neshoko remuromo.Mushure memakore ekuedza nekukanganisa, akazosvika padanho rekuti anogona kunyatsosefa maitiro asina kufanira.
Vashandisi vanofanirwa kunyoresa uye kubvumirana nematemu ebasa, uye vanotyora vanozosefa nevatariri vesaiti. Vazhinji vashandisi vari pasi pemakore makumi matatu uye kune varume vakawanda kupfuura vakadzi. Zvirinani ndeye R rated.
Mitemo Yekusangana Nevatorwa Pamhepo1. Usaite kana kutaura chero chinhu chaungazonyunyuta nezvazvo gare gare. Chat yako, mameseji, odhiyo kana vhidhiyo inogona kurekodhwa zviri nyore uye kushandiswa kukurwisa.2. Kana uri kushungurudzwa, zviudze uye usarudze mushandisi.Ita zvimwe chete kana ukaona munhu achishungurudzwa.3. Usagovera ruzivo rwemunhu chero upi zvake.4. Nyanzvi dzehutsotsi dzichabira ruzivo rwako.5. Usasiye chero chinhu chako pachako muvhidhiyo chat frame, senge mapikicha emhuri kana chero mamwe mashoko anogona kushandiswa nemugari kuronda.6. Dzidzisa mhuri yako nzira yekuchengetedzeka paunenge uchishandisa chero yeaya masevhisi.Nepo mazhinji acho akakwenenzverwa, kuchine zvimwe zvikara zvakangwara kunze uko.7. Kunakidzwa ... ndizvo zvazviri.